फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - इबोला तिमी कहाँ छौ ?
इबोला तिमी कहाँ छौ ? कृष्ण उफान
इबोला भन्ने वित्तिकै तपाईले पक्कै पनि सुनेकै शव्द हुनु पर्छ । पछिल्लो समयमा सञ्चारमाध्यमहरूले विशेष महत्वका साथ प्रशासरण गरिरहेको शव्द हो । इबोला संक्रमित व्यक्तिबाट तुरुन्त अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्ने प्राणघातक रोग हो इबोला सन् १९७६ मा कंगो भन्ने देशको इबोला नदी किनारमा यसको उत्पत्ति भएको मानिन्छ । फलपूmल खाने चमेरोबाट यस रोगको जन्म भएको मानिन्छ । त्यस समयमा करिव ३ सयको हाराहारीमा इबोला आसपासमा वसोवास गर्ने मानिसहरूलाई यस पृथ्वीबाट मुक्ति दिएका थिए । पुनः यो रोग देखा प¥यो र करीव २ हजार भन्दा माथिको संख्यामा मानिसहरूलाई ईश्वरमा लीन गराइसकेको छ । चिकित्सक क्षेत्रलाई चुनौती दिदै फैलिएको इबोला कहाँ गएर टुङ्गिने हो थाहा छैन ।
विश्वभर आफ्प्नो क्षेत्र विस्तार गरेर संसारलाई नै आप्फनो कब्जामा लिनु पर्नेमा के तिमी अफ्रिकाको केही मुलुकमा मात्र सिमित भएर बस्छौ त ? के नेपालमा तिमीलाई आउन मन छैन ? तिमीलाई सिध्याउन विश्वका चिकित्सकहरू अहोरात्र खटिएका छन् । तिमीलाई सखाप पार्ने किसिमको औषधी पत्ता लगाउन कहिले बादरमा परिक्षण गर्छन्, मुसो माथि परिक्षण गर्छन् त कहिले सुगुर माथि परिक्षण गर्दैछन् । सक्छौ र तिम्रो बल ताकत छ भने पहिले त्यस्ता चिकित्सक माथि हमला गर । तिनीहरूको इहलिला समाप्त पार । त्यसकारण त्यस्ता चिकित्सकबाट बचेर जसरी भए पनि सगरमाथाको देशमा आउने चेष्टा गर । म तिमी आउने बाटा भरी आँखा ओछ्याएर बसिरहेको हुनेछु । तिम्रो आगमनको क्षण मेरो मन यति खुसी हुनेछ कि शव्दकोषमा भएका शव्दले अभिव्यक्त गर्ने शव्द नै छैन । छिमेकीले बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मेको हो भन्दै झुटो दावी गरेपनि सत्य कुरा कहिल्यै हराउन सक्दैन बुद्ध आखिर नेपालमा नै जन्मेको हो । बुद्धको देशमा आउ तिमी । तिम्रो यहाँ अति नै खाँचो छ ।
अर्को कुरा तिम्रो सञ्जाल विस्तारको लागि यो अति उपयुक्त स्थान हो । पुरुषले पनि सुत्केरी भत्ता लप्काउने मुलुक हो यो । त्यसैले पनि यो पुण्य भूमिमा तिम्रो बसाई अति नै रमाइलो हुनेछ । त्रिभूवन विश्व विद्यालय जस्तो गरिमामय शैक्षिक संस्थामा सिलप्याकका बील पेश गरेर हिसावकिताब मिलान गर्ने देशमा तिमीलाई मिल्ले किसिमको मौसमी हावापानी छ । त्यति मात्र हो र रक्तचन्दन ओसारपसार गर्नको लागि पनि यो मुलुक अति सुरक्षित छ । यहाँबाट विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पु¥याउन सकिन्छ । लागु पदार्थ ओसारपसारको ट्रान्जिट व्वाइन्ट नेपाललाई मानेर कयौं विदेशीहरूले विश्यका थुप्रै मुलुकमा पु¥याइसकेका छन् । त्यसको लागि सुरक्षित स्थलको रुपमा मान्छन् । त्यसकारण इबोला तिमीलाई पनि यहाँको माटो, हावा, पानी समय परिस्थिति सबै मिल्ने खालको छ । विश्वका चर्चित आतङ्कवादीहरूले यहाँ बसेर योजना बनाउछन् र विश्वलाई धावा बोल्छन् । त्यसकारण हरेक अपराधिक क्रियाकलाप गर्नको लागि नेपाल सुरक्षित स्थल हो ।
यहाँका केही बदामास, उल्लु, छट्टुहरूले यदि इवोला भाइरसलाई नेपालमा प्रवेशको मौका दिइयो भने डामाडोल हुन्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थलबाट नेपाल भित्रिने गौडामा विशेष निगरानी अपनाइरहेका छन् । त्यसकारण तिनीहरूको आँखा छलेर भएपनि तिमी नेपालमा भित्रिनु चाँही पर्छ है । समयको माग हो । तिमी अहिले नेपालमा भित्रियौ भने इतिहासमा तिम्रो नाम रहनेछ । तिमीले नेपालमा भित्रिएर अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा प्रवेश गर्नुपर्नेछ । किनकी नेपालीहरूलाई संविधान चाहिएकै छैन । त्रिसठ्ठी सालदेखि संविधान विहिन अवस्थामा नेपाल कसरी चलिरहेको छ भने अव किन चाहियो संविधान ? संविधान नभएमा अपराधीहरूले चलखेल गर्ने मौका पाउछन् । चप्पल छापेहरू रातारात हेलिकप्टर किन्ने हैसियत हुन्छन् । गुन्द्रुकेहरू रातारात चौरासी व्यञ्जनका प्रयोगकर्ता बन्छन् । सक्नेले फाइदा लिइरहेकै त छन् नि ? कुनै नेपालीलाई समाएर नजिकैबाट मनलागी गोली ठोकेर मार्छन् र अपराधी हो ज्यान जोगाउन भाग्दै हामी माथि गोली ठोक्न लाग्दा प्रतिकारमा जवाफी कारवाही गर्दा उनको ज्यान गएको हो । इन्काउनटरमा मारिएका हुन् भन्दै मान्छे मारेकोमा गौरव गर्छन् । आफ्नै देशको नागरिकलाई हत्या गर्ने कानून कहाँ छ ? यसरी विना संविधान पनि देश चलिरहेको समयमा यहाँका सभासदहरू रातोदिन लागिपरेर आगामी माघ ८ गते नै संविधान जारी गर्नेछौ भन्दै मरिमेटेर संविधान लेखनमा लागिरहेका छन् । संविधानसभा– २ ले संविधान जारी गरेमा अनर्थ हुनेछ । त्यसकारण तिमीले नेपालको संविधानसभा हलमा प्रवेश गरेर सकेसम्म ६०१ सभासदलाई नै सखाप पार्नु प¥यो । यदि सबैलाई सखाप गर्न सकेनौ भने पनि संविधान बनाउनै पर्छ भनेर आपूm पनि मरिमेटेर लाग्ने र अन्य सभासदलाई पनि यसै कार्यमा सरिक गराउन खोज्ने सभासदलाई खोजी खोजी सखाप पारिदिनु प¥यो । नेपालमा अनर्थ हुनबाट बचाउनु प¥यो ।
भन्सार छलेर रातारात नेपालमा ल्याएर जाली नोटको कारोवार पनि यहि हुन्छ । भन्सा।र राजश्व छली गरी किलोका किलो सुन पनि नेपालमा ल्याउन पछि पर्दैनन् । नाकामा बस्नेलाई यसो खल्तीमा केही व्यवस्था गरेमा देखे पनि नदेखेको जस्तो गरेर तस्करहरूलाई सजिलैसँग पास दिन्छन् । त्यस कारण तिमीलाई पनि अवरोध गर्न खोज्यो भने पश्चिमी मुलुकको केही हरिया डरलको व्यवस्था गरिदेउन तिमीलाई सलाम ठोकेर बाटो खुलाईलिन्छन् । नेपालीहरू कही कतै पनि घुस खाँदैनन् । भ्रष्टाचार गर्दैनन् । त्यो चाँही याद राख है । नत्र फेरि कालकोठरीमा लगेर कोच्ला नि । अख्तियारमा अहिले लोकमानसिंह कार्कीको हालीमुहाली छ । छोरी कुटेर बुहारी तर्साउर्दछ । छोरीको कुटाईमा पर्नुहोला ।